Gareen ABUT karoorri haleellaa akka Maayikaadraa magaalaa Humaraatti raawwachuuf yaadee ture saaxilame – Welcome to Fana Broadcasting Corporate S.C
Gareen ABUT karoorri haleellaa akka Maayikaadraa magaalaa Humaraatti raawwachuuf yaadee ture saaxilame
On Jul 22, 2021 480
Finfinnee, Adooleessa 15, 2013 (FBC) – Gareen ABUT karoorri haleellaa akka Maayikaadraa magaalaa Humaraatti raawwachuuf yaadee ture saaxilamuu ibsame.
Gareen shororkeessaa ABUT karoorri haleellaa akka Maayikaadraa magaalaa Humaraatti raawwachuuf yaadee ture saaxilamuu Fuulli Odeeffannoo haala wayitawaa Mootummaa adda baasu beeksiseera.
Gareen shororkeessaa kun akkaata karoora isaatti namoota naannoo TigraayiI fi Sudaan irraa galchuun haleellichaa akka raawwachuuf ture beekKameera.
Fuulli Odeeffannoo haala wayitawaa Mootummaa adda baasu akka beeksiseetti, gareen kun haleellaa kana raawwachuuf akka itti toluuf naannoo AfaariI fi Raayyaatin haleellaa irraa deddeebii raawwachuun xiyyeeffannaa Raayyaa Ittisa Biyyaa fi humna addaa Naannoo Amaaraa Jijjiruuf yaaleera.
Juuntaan ABUT tibbana humni addaa naannoo Amaaraa fi Raayyaan Ittisa Biyyaa Humaraatti haleellaa akka raawwatu, fuula miidiyaalee hawaasan raabsuu akka jalqabu, karoorri isaa ni muul’isa jedheera Fuulli Odeeffannoo haala wayitawaa Mootummaa adda baasu akeekkachisa tokkoffaa jedhe ibsa baasen.
Preezdaant Joo Baayidan ajeja qoqqoobbii Ityoophiyaarratti dabarsan akka haqan…
Godina Walloo Kibbaatti lammiilee qa’ee fi qabeenya isaanirraa buqqa’an…
Ajajni Lixaa garee shororkeessaa ABUT barbadeessuuf damee hundaan ga’umsa…
Sheer Kaampaaniin Priimayer Liigii Ityoophiyaa Birrii miiliyoona 8 Raayyaa Ittisaaf…
MM Abiy Xaalayaa Preezdaantii Ameerikaa Joo Baayidaniif…
Miseensota Raayyaa Ittisaa raawwii olaanaa galmeessaniif…
Gareen shororkeessaa ABUT lammiilee nagaa jumlaan ajjeesuun…
Godina Walloo Kibbaatti lammiilee qa’ee fi qabeenya…
Ajajni Lixaa garee shororkeessaa ABUT barbadeessuuf damee…
Oduu biyya keessaa9081